कथा सरकारी जागिरेको “सुब्बासाब, भुत र अन्डरवयर”
फाल्गुन २६, २०७६ सारङ्गी न्यूज
श्रीमानका दुईवाट सेतो सर्ट, एउटा कालो निलो पाइन्ट, दुईवटा सेन्डो र एउटा अन्डरवयर । जम्मा छ थान कपडा धुन निस्केकी हुन । भिजेको देखर हो वा किन हो । अन्डरवयर पहिले धुने कुरा उनलाई उत्तम लाग्यो । छ थान कपडा धुन उनलाई पन्ध्र देखि बिस मिनेटमा लाग्नु पर्ने हो । त्यसो भएन । खै कहाँ पुर्‍यायो अन्डरवयरले ।
उनि भन्दा पछि लगातर चार जना छोरीहरु जन्मेपछि बा अलि निरास थिए । एकदिन बजार जान्छु भनेर निस्केका बा छ महिना सम्म बेपता भए । छ महिना पछि अर्को बिहे गरेको हल्ला गाँउमा सुनामी जस्तै आयो । श्रीमानले अर्को बिहे गरेको खबर ल्याउनेसँग आमाले "यो त सत्रु नै रहेछ मेरो । कहिले सुख दिएन । अहिले यो उमेरमा आएर सौता हाल्यो । म पनि उस्तै । भाग्य यस्तै थियो त्यसैले बुद्धि पुगेन । ठुला चौरको पण्डितका छोरा मास्टर माग्न आएका थिए । यो पापिको माया लाग्यो । उनलाई हुन्न भने । हुनतः यो पापिले मलाई कहिले सुख दिएको थियो र ? त्यो पनि सुख पाँउला भनेर आएकि होलि । पापिको असली रुप देख्नेछ ।" यो भनेको सुनेपछि बल्ल सुस्मिताले बाको निष्ठुरीपन थाहा पाइन् ।
​श्रीमानबाट आशा गरेको माया महसुस नगरेकोले होला । अर्को बिहे गरेकोमा खासै दुःख मान्न आमाले छोडिसकेको जस्तो लाग्थ्यो सुस्मितालाई । अर्को बिहे गरेको केहि समयपछि एक दिन बा टुप्लुक्क घर आए । आमाले बाको नजिकै गएर खुट्टा ढोग्नु भयो । बोल्नु केहि भएन । केहिछिनको मौनतालाई बाले भङ्ग गरे । "हेर सुस्मेको आमा नरिसा । जे हुनु भईसक्यो । म तिमिहरु सबैलाई उतिकै ध्यान दिन्छु ।" रङ्गेहात पुलिसले पक्रेको चोरले जस्तै माफी मागे बाले । आमाले ठाँउ पाइन । "उति बेला आँखा देखेन । अहिले 'फतफताउन' आएको हौला । अरु म जाँन्दिन सुस्मेले पढ्न काठमाण्डौं जान्छु भन्छे त्यसको सबै व्यवस्था तिमिले गर्नुपर्छ । आमा अरु पनि केहि भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । वाक्य फुटेन । धोतिको सप्कोले रसिला आँखा पुछ्दै भन्नुभयो, "तिमिबाट मैले सुख त कहिले पाइनँ । त्यसैमा मर्ने बेला सौता हाल्यौं ।" महिलाको ह्दय खोल्दै "मलाई जस्तो उसलाई दुःख नदिनु ।" आमाको भावनामा बा पनि पग्लिए । बा बोले "मलाई माफ गरि दे ।" रिसले हार्दै गयो । प्रेमले जित्दै गयो । विस्तारै सबै कुरा मिले जस्तै भयो । सुत्ने बेला एउटा कुराले सुस्मितालाई सोच्न बाध्य बनायो । सुस्मिताले सोचेकी थिइन । पक्कै आमा र बा एउटै कोठामा सुत्दैनन् । तर उनले सोचे जस्तो भएन । आमाले नै बालाई आफु सुत्ने कोठामा लगिन् । यो सब कुरा देख्दा सुस्मिताको मनमा उत्तर बिनाको प्रश्न उब्जियो । "आमाले कुनै परपुरुषसँग बिहे हैन एक रात मात्र बसेको भए ? आमाले माफ पाँउथिन होला त ? यसरी नै बाले आमालाई सगैँ लिन्थ्यो होला त ? "यसको जवाफ हैन प्रश्न मात्र थियो ।"
कक्षा बाह्र पछि स्नातक तहका लागि काठमाण्डौं गइन् । तिन वर्षमा स्नातक सकियो । अब खालि हात फर्कनुको कुनै विकल्प थिएन । सँगै स्नातक सकेका धेरै साथीहरु कोहि लोक सेवा पढ्ने कुरा गर्थे त कोही विदेश जानका लागि ट्रोफेल तथा आइएलटिस जस्ता कोर्षको तयारिका कुरा गर्थे । यस्तै बेला झट्ट उनलाई गाँउको सिंहदरबारमा जागिर गर्ने दाइको सम्झना आयो । उनले कुनै आइडिया दिन्छन् जस्तो लाग्यो । सोधखोज गरेर मोबाइल नम्बर पत्ता लगाइन । दुबै कान देखिने गरि खिचिएको स्यामस्वत फोटो टाँसिएको नेपाली नागरिकता पहिलो पटक काम लाग्यो । जनताका प्रतिनिधी बस्ने देशको नीति बन्ने ठाँउमा सर्वसाधारण जनता छिर्न भित्रबाट खबर आउनु पर्ने अवस्था अचम्म लाग्यो उनलाई।
उनले कल्पना गरे भन्दा सयौं गुणा ठुलो र फरक थियो सिंहदरबार । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कोठा नं. २०५ मा गइन् । सामान्य ‌औपचारिकता पछि उनले सोधिन । "के गर्ने होला दाई ? कोहि साथिहरु विदेश जाने कुरा गर्छन कोहि लोकसेवा तयारीको कुरा गर्छन । म त धेरै ठुलो दोधारमा परे । दाईले सिधै सिफारिस गरे "लोकसेवाको तयारी" । त्यो पनि अधिकृतको । छुटिदै गर्दा दाईले भने "मैले पनि एउटा तयारी कक्षा हुने ठाँउमा क्लास लिन्छु । त्यहि आउनु । म फिस छुटको कुरा गरौंला ।" हुन्छ दाई भन्दै उनि छुटिइन । तयारी कक्षा सुरु गरिन । तयारी कक्षाको चार पाँच दिन वित्यो ।
एक दिन बाटोमा कसैले प्रश्न गर्‍यो ।
"तपाई पनि ढिला हुनु भएछ त ?"
"आज अलि ढिला भयो ।" कता हो तपाईको घर ? प्रश्न तन्काइन ।
पश्चिम कुन जिल्ला ?
तपाईको कता ?
"प्युठान" । भावनात्मक एकता देखाउन उसले भन्यो "दुबै पश्चिमका रहेछौं ।" कतै जागिर पनि छ कि ? उस्ले सोध्यो ।
म काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको प्रशासन फाँटमा नायव सुब्बा पदमा कर्यरत छु ।
कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कार्यालय जस्तो देखिने । लोकसेवा तयारीको त्यो भवनले धेरैका सपना साकार बनाउने बाटो तय गरिदिएको थियो । कसैको केवल आशा मात्र जिवित राखेको थियो । हरेक दिन विहान चार बजे देखि राति करिव दश बजे सम्म मान्छेहरु जागिर खाना हैन जागिर खाने बाटो खोज्न आउथे । कतिले जागिर पाएनन । त्यसको रेकर्ड थिएन । तर कतिले पाए भन्ने रेकर्ड अवश्य थियो । हरेक पल्टको अभिमुखिकरण कार्यशालामा जागिर खानेको विवरण हिन्दुले गणेशको पुजा गरे जस्तै गरि बाचन गरिन्थ्यो । सुरुको तिन चार दिन अलि गाह्रो जस्तो लाग्न थालेको थियो सुस्मितालाई । एक दिन बेलुका किताब हेर्दै गर्दा उनले पछाडी बस्ने सुब्बालाई सम्झिन । एक पटक लोकसेवा पास गरेको मलाई भन्दा बढि उसलाई थाहा छ होला । छलफल गर्दा अलि सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्यो । एकदिन संयोगले बागबजारको मिनि बसपार्कमा दुबै जना भेटिए । "मैले त पढाएको नि बुझ्दैन । बेकार समय मात्र बित्ने हो जस्तो लाग्दै छ । तपाई लोक सेवा आयोग पहिले पास गरेको मान्छे अलि बढि ज्ञान र आइडिया पनि होला । मलाई पनि सहयोग गर्नु पर्‍यो सर । म त साह्रै तनाबमा छु ।" भन्दै प्रसंग सुरु गरिन् । उसले पश्चिम तराईमा जागिर गर्दा पानले बिगारेका दाँत देखाउदै भन्यो । "मैले नि के जान्नु मिस दुई पटक दिई सके पोहरसाल पहिलो चरणमा नि आएन । के गर्नु यस्तै छ । तर पनि मैले गर्न सक्ने सहयोग गर्न म तयार छु । "तपाईको नम्बर सर ? नम्बर दिन छोडेर कुटनीति प्रयोग गर्‍यो । "तपाईको भन्नु त म डाइल गर्छु ।" लोकसेवाको परिक्षाको बहुबैकल्पिक प्रश्नको उत्तरमा लगाउने जस्तो ट्रिक लगायो । उनको लागि नम्बर दिँदा आफुले पनि लग्यो ।
शनिबारको दिन सुस्मिताले सुब्बासाबलाई भटेर केहि नबुझेको कुरामा छलफल गर्ने सोचका साथ फोन गरिन । सुब्बासाबले इमोसनल ब्रल्याकमेल गर्दै भने- "मैले नि तपाईलाई सम्झिरहेको थिए ।" साँझ चार बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनको भवन नजिक भेट्ने कुराले फोन टुङ्ग्यायो । भेटमा उनले आफुलाई कन्फ्युज भएका धेरै कुरा सोधिन् । सुब्बासाबले जतिसक्यो प्रष्ट पारिदिए । हरेक शनिबार भेटेर छलफल गर्ने कुरामा त्यसदिनको बसाई सकियो । यति धेरै जानेका सुब्बाले पास गर्न नसकेको मैले सकुला त भन्ने सोच्दै कोठा पुगिन् । तयारी कक्षाका विज्ञले जानेर मात्र हुँदैन, लेख्न सक्नु पर्छ । त्यसैमा अलि अलि त लक नि चाहिन्छ भन्ने गर्थ्यो । यी दुई वाक्यले कमजोरहरुको आत्मबल बढाउथ्यो ।
एक दिन सुस्मिताले क्लासमा ढिला आउनुको कारण खोजिन । उहि बिग्रेका दाँत देखाउदै भनेको थियो । "अदालतको जागीर समयमा पुग्नुपर्छ ! यहाँबाट कार्यालयमा हिडेर पुग्छु ! त्यहि बबरमहल नजिकमा बस्छु ! गाडी चढ्नु जाम धेरै । हिड्दै गए समय पुग्न सजिलो हुन्छ । अगाडि बस्दा निस्कदा अरुले डिस्टर्व मान्छन् ।" मागेको भन्दा बढि उत्तर दियो । सुस्मिता र सुब्बासापको भेटघाट बाक्लिदै गयो । सुब्बासाप विवाहित थिए । सुब्बासाबको बिहे एसएलसी दिएपछि बाले खोजेकी बुहारीसँग भएको थियो । सुब्बासाबकी जीबन सङ्गिनीसँग हैन । बिहेको कुरा न सुस्मिताले खोजिन न सुब्बाले भने । फोनमा हुने कहिलेकाँहिको संवादको पृष्ठभुमीको आवाजले उनले सहज अनुमन लगाउथिन । सुब्बासाप बिबाहित हुन भन्ने कुरा । गाँउमा फोनको टावर राम्रो थिएन । कतिपटक श्रीमतीसँग कुरा गर्दा गर्दै फोन बुझिदैन थियो । सुब्बासाब नेतालाई गालि गर्थे । "साले नेताले देश डुबाए।"
दुबैजनाको सम्बन्ध अधिकृत बन्ने स्वार्थमा थियो । अरु केहि थिएन । एक शनिबार सुब्बासापले प्रस्ताव गरे । "बाहिर बस्दा होहल्ला डिस्टर्ब हुन्छ । अलि शान्त कोठामा नै हुन्छ होला । म हरेक शनिबार तपाईको कोठामा आउछु । त्यहि बसेर छलफल गरौंला । तपाईले बनाएको चिया पनि खान मन छ । "भन्दै सुब्बासाबले कुटनीति राम्रो प्रयोग गरे । सुस्मितालाई आफ्नो कोठा लिन अलि सहज लागेन । “म नै सरको कोठामा आउँछु ।” सुस्मिताले नियतमा खोट देखिनन् र कोठामा भेट्ने कुरा सहज स्वीकार गरिन् । आफ्नोमा हैन सुब्बासाबकोमा । छलफल टियूबाट सुब्बासापको कोठामा सर्‍यो ।
सुब्बासाबको रुम कुनै स्नातक पढ्ने विद्यार्थीको भन्दा खासै फरक थिएन । बाँसको किताब राख्ने र्‍याकमा नियमित सोपानको अंक । चालु लेखकका लोकसेवा तयारी गाइड । एउटा सानो किचेन र्‍याक र एउटा खाट । मध्यम वर्गिय विद्यार्थिको कोठा भन्दा फरक कर्मचारी पनि हुन भन्ने चिनाउन कर्मचारी परिचय पत्र, दुई जोर युनिफर्म र एक एउटा निलो कोटले सुब्बासाबको परिचयलाई कर्माचारी बनाएको थियो ।
एक साँझ सुस्मिताको मोबाइलमा म्यासेज नोटिफिकेसन देखायो । दुरसञ्चार कम्पनीहरुले ग्राहकलाई झक्झकाउने, जिस्क्याउने र चिरचिराहट गराउने अटोमेटिक मेसेज पठाई रहन्छन् । त्यस्तै होला भनेर वास्ता नगरेको तर डिलिट गर्नु अघि खोल्दा । “ मिस यु एण्ड लव यु । “नम्बर सुब्बासाबको थियो । तत्काल उनले खासै चासो गरिनन् । अफिसर हुने जिजिबिशाले अलि कमै निद्रा पर्थ्यो । आज सुब्बासाबको म्यासेजले निदाउने छाँटकाट अलि तन्कने देखियो । उनले म्यासेज झुक्किएर आएको हुनुपर्ने अनुमान गरिन् । कुनै प्रतिक्रया दिइनन् ।
म्यासेज पछिको पहिलो भेटमा सुब्बासाप अलि रातो देखिएका थिए । तर सुस्मिताले त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदिनुलाई सुब्बासाबले मौनता नै स्विकृती हो भन्ने तथाकथित अर्थ लगाए सायद । आत्मबल बढाए । त्यसपछिका दिनहरुको भेटघाटहरुमा सुब्बासाबले शरिर छुन खोजेको आवास सुस्मितालाई नभएको हैन । तर नियत गलत नभएर परिस्थितिले भएको जस्तो बाहना गर्न सक्ने सुब्बासापको क्षमताले सुस्मितालाई कन्फ्युजमा पार्थ्यो । केहि शनिबार यस्तै बिते तर सुब्बासापको शरिर छुन खोज्ने व्यबहार घट्ने हैन बढ्न थाल्यो । तर अझै पनि नियत नै खराव भए जस्तो पाउदिन थिइन् ।
एकदिनको शनिबार नियत नै देखिने गरि सुब्बासाप प्रस्तुत भए । सुस्मिताले प्रतिकारको नरम उपायहरु अपनाइन । ति उपायहरु प्रभावकारी भएनन् । सुब्बासापले जिते । आफ्नो उद्देश्य पुरा गरे । उनले हरिन् । हरेक यौन सम्बन्धमा महिलाले हार्छन् । तर उल्टै सुब्बाले "सरी" भन्दै जितलाई हार जस्तै बनाए । त्यसदिन रात भर सुस्मितालाई निद्रा भन्दा ग्लानीले सतायो । अब सुब्बालाई कहिले नभेट्ने प्रतिवद्धता गर्दै कतिबेला निदाइन । तर सपनाले उनको प्रतिबद्धता टिक्न दिएन । त्यस रातको सपनामा सुब्बासाप भेटिए। माफि मागे । आफुले अभिभावक जस्तो मानेको मान्छेले माफि मागेको देख्दा सपनामा नै सुब्बासाबको सुस्मितालई माया लाग्यो । सुस्मिताले बिबाहित सुब्बासाबसँग बिवाहको कल्पना कहिल्यै गरिनन् । न बिहे इतर यौन सम्बन्धको कल्पना । सुब्बासापको कोठामा जानु आफ्नो गल्ती भएको जस्तो महसुस भयो । केहि हप्ता त उनले सुब्बासाबलाई सम्पर्क गरिनन् । सुब्बासाब पनि बिष्णुले जालन्धरको श्रीमतीको सत्यलाई पराजित यौनले गरेको कथा पढेका पहाडी बाहुनको छोरा थिए । उनि जितको उन्मादमा थिए वा नजिकै आएको परिक्षाको तयारीमा थिए। उनले पनि खासै सम्पर्क गरेनन् ।
सुस्मिताले अरु जेसुकै भए पनि लोकसेवाको तयारी परीक्षामा सुब्बासाबबाट धेरै सिक्ने अबसर पाइन् । उनकै सहयोगले परिक्षा पास गर्ने आत्माविश्वास पनि बढेको थियो सुस्मिताको । सबै तयारीका चरण पुरा गरेपछि । अफिसरको परिक्षा दिएर सुस्मिता घर फर्किन । परिक्षा सकिएको करिब चार महिना पछिको एकदिन बिहानै मोबाइलमा म्यासेज आयो ।
"बधाई छ ।" नम्बर उनै सुब्बासापको थियो । म्यासेज देखे पछि उनले फोन गरिन् । सुस्मिता सफल भएको तर दुर्भाग्य सुब्बासाप असफल । समय फेरियो । अब सम्झाउने पालो सुस्मिताको आयो । हतास तथा चिन्तित नहुन भन्दै अभिभावकीय भुमिका निभाइन् । आफु तत्काल काठमाण्डौ आउने भेट्ने कुरा पछि फोन काटियो । अठार घण्टाको नाइट बसको यात्रा पछि उनि सिधै सुब्बासापको कोठामा गइन । पहिलेको घटनालाई उनले लगभग सबै बिर्सिय जस्तै गरि खुलेर गफ गरिन् । सुब्बासाबकै कोठामा नै खाना खाइन् । त्यसपछि उनै गाँउको उपसचिव दाईसँग अन्तर्वाताको तयारीको आइडिया लिन सिंहदरबार गइन् । दाईसँग अन्तर्वातामा गर्नुपर्ने तयारीको छलफल पछि दाईकै आग्रहमा क्यानटिनमा खाजा पनि खाइन् । दाईसँग कर्माचारी प्रशासन शाखामा काम गर्ने अर्को उपसचिव पनि भेटिए । त्यसदिनको रात सुस्मिता सुब्बासापको कोठामा नै बसिन् । पहिले जुन कुरा गलत भयो भन्ने लागेको थियो । यस पटक सुस्मितालाई त्यहि कुराले मज्जा दिलायो । दुबै जना सँगै एउटै खाटमा सुते । अन्तिम नतिजामा पनि सुस्मिता सफल भइन् । शाखा अधिकृत पास भएको केहि समय त सुब्बासापगँग भेटघाट हुन्थ्यो । पुरुषवादी सोचले हो या कर्माचारीतन्त्रको पदिय सोपानले सुब्बासापले शाखा अधिकृत सुस्मितासँग भेट्न अनि आफ्ठेरो मान्न थाले । भेटघाटले पातलो रुपधारण गर्‍यो । सुस्मिताको पदस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जनशक्ती विकास शाखामा भयो । यस्तै छ सात महिना पछि एकदिन उनै गाँउका उपसचिव दाईले क्यानटिनमा खाजा खाना बोलाए । अन्तर्वाताको बारेमा बुझ्न जाँदा क्यानटिनमा भेटिएका उपसचिवसँगै थिए । खाजा खाने क्रममा गाँउको दाईले जिस्क्याए । "अब बिहे गर्नु पर्‍यो बहिनी ।" साँझ दाईले सुस्मितालाई फोन गरे । आज भेटिएको उपसचिवले मन पराएको भन्दै दाईले बिहेको मध्यस्थता गर्न खोजे । उनै उपसचिवको बखान गर्न थाले । "दाई म घरमा आमासँग कुरा नगरि अहिले केहि भन्दिन।" भन्दै उपसचिवले पेश गरेको निर्णयको टिप्पणी शाखा अधिकृत सुस्मिताले बिचाराधिन बनाइन् । करिव एक हप्तापछि ती दाईले त्यहि प्रसंग उठान गरे । खरिदारले टिप्पणी पेश गरे जस्तै गरि । आमासँग सामान्य कुरा राखेपछि । सुस्मिताले दाईको प्रस्ताव सदर गरिदिइन् । बिहेको कर्डमा लेखियो । "उपसचिव कुलानन्द जोशी र शाखा अधिकृत सुस्मिता भट्टको शुभ बिवाह ।" बिवाहको मिति तय भए देखि नै सुस्मितालाई एउटा कुराको तनाब शुरु भयो । बिहे अघिको यौन सम्बन्ध कसरी लुकाउने । लोकसेवामा कसैले नमिलाउने प्रश्नको जवाफ दिने गुगलमा सर्च गरिन् । "हाउ टु रिकभर भरजिनिटी अगेन ?" तर यसको सहि समाधान गुगलले पनि दिन सकेन । गुगलले लेख्यो “देर इज नो वये टु रिगेन भरजिनिटि । "युटुवमा भिडियो सर्च गरिन त्यहाँ पनि भरपर्दो उपाय भेटिनन् ।" यौन साहित्यका थुप्रै किताव पढिन् त्यहाँ पनि उनलाई चाहिएको कुरा भेटिएन । रत्नपार्कमा बाँडिने पर्चामा लेखिएको ठेगाना अनुसार यौनी टाइट गराउने ‌औषधी पनि नकिने कि हैनन् । तर उपाय प्रभावकारी कतै भेटिएन । यति गर्दा गर्दै बिहेको मिति आयो । बिहे सकिएको पहिलो रातको पहिलो शारिरिक सम्बन्ध अलि पिडा धेरै भएको बहाना गर्ने स्वनिर्मित उपाय नै उनलाई उत्तम लाग्यो ।
सुस्मिताले न कहिले दोश्रो श्रीमती बिहे गरेका बाको सत्यता खोजिन् । न आमाको यौन जीवनमा आमालाई सोचिन् । न सुब्बासापको सत्यता खोजिन् न हूँदै गरेको श्रीमानको सत्यता खोजिन् । तर आफुलाई खोजिरहिन् । सोधिरहिन् । पहिलो रात पिडाको बहानाले कटाईन् । त्यसपछिका हरेक रात बिर्सिएको सुब्बासाप सुस्मिताको भ्रमको भुत बनेर आउने कुरा पक्का पक्कि जस्तै भयो । सुब्बासाबले श्रीमतीसँग रात बिताउँदा म भुत बन्छु होला ? यो कहिल्यै सोचिनन् ।
न कुनै हिच्किचाहट । न कुनै संकोच । न श्रीमतीले छोड्ला भन्ने डर । न कुनै कुमारत्व गुमाएको ग्लानी । निर्धक्क र ढुक्क । ठुलै उपलब्धी सहितको विजयगाथा । यही अन्डरवयरले छोप्छ । मेरो हरेक रातको भुत बन्ने बस्तु ढाक्छ । यौनी पुरुषको खेलौना महिलाको सर्बस्व । भन्ने सोच्दै थिइन् । "सकिएन अझै ?" भन्दा बल्ल झल्यास भईन सुस्मिता ! झ्याप्पै मुटुको गति बढ्यो । जवाफ मनले हैन दिमागले दियो ।
"सकिदैछ ।" झट्ट कपडा मिचिरहेको बाँटा हेरिन ।
"अहो ! उफ !" आवाजमा हैन । मनमा मात्र आयो । हातमा श्रीमानको अन्डरवयर थियो ।
सोमवार, फाल्गुन २६, २०७६, ०३:०३:००